I-Aquarius Horoscope: Umqondiso we-Aquarius Zodiac kunye nemihla yokuhambelana kwayo, iimpawu kunye neempawu - Emanzini
I-Aquarius Zodiac Sign Horoscope
Ulwazi lwe-Aquarius ngeenkwenkwezi x
Umbala: Blue, Green-Blue, Grey, Black
Ukuhambelana okukhulu ne: Gemini, Libra
Iqabane eligqwesileyo loMtshato kunye neNtsebenziswano: Leo
Amanani ethamsanqa: 4, 8, 13, 17, 22, 26
Isikhundla sokuzalwa: NgoJanuwari 20-Februwari 18
Amandla: Iqhubela phambili, imvelaphi, izimeleyo, inobubele
Ubuthathaka: Uyakuphepha ukuvakalisa iimvakalelo zabo, ukucaphuka, ukungalalani, ukude
U-Aries uyathanda: Ukuzonwabisa kunye nabahlobo, ukunceda abanye, ukulwa nezizathu, iingxoxo zengqondo, umphulaphuli olungileyo
U-Aries akathandi: Ukulinganiselwa, izithembiso ezaphukileyo, ukuba wedwa, iimeko ezikruqulayo, abantu abangavumelaniyo neengcamango zakho
Ama-Aquarians anentloni kwaye athule, kodwa kwangaxeshanye, anokuba ne-eccentric kwaye anamandla. Noko ke, kuzo zombini ezi meko, bangabantu abacingayo nabakrelekrele kakhulu, yaye bayakuthanda ukunceda abanye. Bayakwazi ukubona amacala omabini emeko ngaphandle kokubandlulula, okubavumela ukuba basombulule iingxaki.
Nangona bekwazi ukuziqhelanisa ngokulula namandla ajikelezileyo, i-Aquarius inesidingo esinzulu sexesha ledwa kunye nokubaleka kuyo yonke into ukuze iphinde itshaje. Abantu abazalwa phantsi kwalo mqondiso babona ihlabathi njengendawo egcwele amathuba.
I-Aquarius luphawu loMoya, kwaye ngenxa yoko, bahlala besebenzisa ingqondo yabo. Ukuba akukho vuselelo lwengqondo, bayakruquka baze baphulukane nomnqweno wokwenza konke okusemandleni abo.
I-Uranus, iplanethi elawulayo ye-Aquarius, inamahloni, ngokukhawuleza kwaye ngamanye amaxesha indalo ndlongo, kodwa oko kunika u-Aquarius amandla ombono. Bayakwazi ukubona kwangaphambili ikamva kwaye bazi kakuhle into abafuna ukuyenza kwiminyaka emihlanu okanye elishumi ezayo.
I-Uranus ikwabanika amandla okuguqula ngokukhawuleza nangokulula, yiyo loo nto baziwa ngokuba ngabacingeli, abaqhubela phambili, kunye nabantu. Baziva belungile kumaqela okanye ekuhlaleni, ngoko bahlala bejonge ukujikeleza nabantu. Eyona ngxaki ka-Aquarius kukuziva enqongophele okanye enyanzelekile. Ngenxa yomnqweno wabo wenkululeko kunye nokulingana komntu wonke, baya kuhlala befuna inkululeko yabo yokuthetha kunye nokunyakaza. Abantu base-Aquarians badume ngokuba ngabantu ababandayo nababukhali, kodwa leyo yindlela yabo yokuzikhusela ngokuchasene nokusondelana kwangaphambi kwexesha. Bafuna ixesha lokuthemba abantu kunye nokuvakalisa iimvakalelo zabo ngendlela ephilileyo.
Aquarius Uthando kunye nesondo
Uvuselelo lobukrelekrele yeyona nto imnandi kakhulu. Akukho nto itsala i-Aquarius ngaphezu kwencoko enomdla. Ukuvuleka, ukunxibelelana, ukucinga kunye nokuzimisela ukuthatha ingozi ziimpawu ezichaza lo mqondiso kakuhle. Ingqibelelo kunye nokunyaniseka ziimpawu ezibalulekileyo kuye nabani na ofuna ubudlelwane bexesha elide nalo mntu unamandla. Xa bethandana banyanisekile, bazinikele kwaye abananto konke konke; banika inkululeko kumaqabane abo, babacingele ngokulinganayo.
Usapho luka-Aquarius kunye nabahlobo
Nangona ii-Aquarians zinxibelelana, zifuna ixesha lokusondela ebantwini. Ukuthathela ingqalelo ukuba bangabantu abanovelwano kakhulu, ukusondela kubo kuthetha ukuba sesichengeni.
Ukungxamiseka kokuziphatha kwabo kudityaniswe neembono zabo ezinamandla kubenza kube nzima ukuhlangabezana nazo. U-Aquarius uya kwenza nantoni na kumntu othandekayo, kunye nokuzincama.
Ubuhlobo bakho kufuneka bube nezi mpawu zintathu: ubuchule, ingqondo kunye nokuthembeka.
Xa kufikwa kusapho, izinto ozilindeleyo ziyafana nezo uzibekele abahlobo bakho. Nangona benemvakalelo yokuba nembopheleleko ngezalamane zabo, abayi kulugcina unxulumano nabo ukuba oko bebekulindele akufezeki.
Umsebenzi we-Aquarius kunye nemali
Abantu base-Aquarians ngabo bazisa umdlandla emsebenzini wabo kwaye banobuchule obumangalisayo bokuxhaphaza iingcinga zabo ngeenjongo zoshishino. Imisebenzi ephuhlisayo kunye nengqiqo iya kuhambelana kakuhle nolu phawu lwezodiac. Ubukrelekrele babo obukhulu, kudityaniswe nomnqweno wabo wokwabelana ngeetalente zabo, kukhuthaza abantu abaninzi abasebenza kunye nabo. U-Aquarius ngumbono othanda ukubandakanyeka kwimisebenzi enenjongo yokwenza uluntu lube ngcono.
Xa kuziwa kwimali, olu phawu lwezodiac lunetalente yokugcina ibhalansi phakathi kokuchitha kunye nokugcina imali. Uninzi lwabantu base-Aquarians baziqhelanisa kakuhle nefashoni yabo kwaye aboyiki ukuyibonisa. Akuqhelekanga ukubona i-Aquarius enxibe iisuti ezinzima zemibala eqaqambileyo.
Imisebenzi ebambeleyo, ekufundiseni, ekubhaleni, ekufotweni okanye ekulingweni ifanelekile kulo mqondiso. Indawo egqibeleleyo ye-Aquarius yenye ekunika inkululeko yokusombulula iingxaki ngaphandle kokuthobela izikhokelo ezingqongqo. I-Aquarius luhlobo olungaqhelekanga kwaye ukuba banikwe ithuba lokubonisa italente yabo baya kude kakhulu.
Indlela yokutsala i-Aquarius Man
Kufuneka ukwazi zonke iimpawu ezintle nezimbi zomntu ozalwe phantsi komqondiso we-Aquarius, ukuba ufuna ukumkhohlisa. Amadoda ase-Aquarius akaqikeleleki, akrelekrele, ahlala nabantu, abazimeleyo, kwaye banxibelelana kakuhle. Ezinye zeempawu ezingalunganga zalo mqondiso yinkani yabo, ukungaqiniseki, ukuguquguquka, ukungabikho kokuzithemba. Ukuba ufuna ukuhenda indoda yase-Aquarius, kuya kufuneka ukhululeke kwezo zinto. Ukuba usondela kuye ngokweemvakalelo kakhulu, akanakuze acinge nokucinga ngokukuthatha ulale naye.
Indoda yase-Aquarius idla ngokuhlala ngaphakathi kwengqondo yakhe, yiyo loo nto ifuna inkampani eza kuthetha nayo malunga nenkqubela phambili yeengcamango zakhe. Ngoko ukuba ufuna ukumlukuhla, kuya kufuneka uqale ube ngumhlobo wakhe. Uninzi lobudlelwane babo buqala njengobuhlobo kwaye emva koko buguqukela kwinto ebaluleke kakhulu. Oko kuthetha ukuba indoda ye-Aquarius ayinakuze ibandakanyeke kubudlelwane bothando nomntu ongenabo ubuhlobo naye. Yiba nomonde kwaye ugcine izinto kwisiseko seplatonic de ube ulungele ukwenza intshukumo yakho yokuqala enkulu. Yihloniphe imfuno yabo yenkululeko, ubuntu, kunye nomnqweno wabo wokwenza ihlabathi libe yindawo engcono.
Indlela yokutsala umfazi we-Aquarius
Ubuntu be-Aquarius buzimele, bungaqondakali, bukhululekile kwaye bungenasiphelo. Umfazi we-Aquarius unoburharha obukhethekileyo kunye nendlela ebonakalayo yokujonga ubomi. Nangona kunjalo, ukungabikho kokuhambelana yingxaki eqhubekayo yabasetyhini abazalwa phantsi komqondiso we-Aquarius. Umfazi we-Aquarius ulangazelela uthando kunye neencoko ezilungileyo, nangona ngamanye amaxesha ubonakala ebanda kwaye ekude. Uliqabane elikhulu lezesondo, kodwa kuphela ukuba uqinisekile ukuba unomdla ngaphezu kokwabelana ngesondo ngobusuku obunye.
Ukuba ufuna ukukhohlisa umfazi ozalwe phantsi kwenkwenkwezi ye-Aquarius, kuya kufuneka ubhenele kwiinkalo ezininzi zobuntu bakhe. Abafazi be-Aquarius bathambekele kubantu abavelele kwabanye, ngoko ke ukuba ufuna ukufumana ingqalelo yakhe kubalulekile ukuba uphume kubantu abaziyo. Umfazi we-Aquarius liqabane lezesondo elineengcamango ezininzi, othanda ukuzama izinto ezintsha rhoqo. Nokuba yeyiphi na indlela, ufuna ukuqiniseka ukuba uyazi ukuba ungaphezulu kweqabane lakho ngesondo.
Eyona mpazamo imbi onokuyenza xa uzama ukuhenda ibhinqa lase-Aquarius kukuba ufuna kwaye ube ndlongondlongo. Mnike inkululeko eninzi, ekubeni engumntu ozimeleyo kakhulu ongayi kunyamezela naluphi na uhlobo lolawulo kuye. Ukutsala ingqalelo yakhe, kufuneka umbonise ukuba ungumntu okhululekileyo nozolileyo. Umfazi we-Aquarius akakhululekanga nabantu abathetha ngeemvakalelo zabo ngokukhululekileyo, ngoko uphepha izihloko zeemvakalelo kwaye endaweni yoko ubhenela ingqondo yakhe.
Iimpawu ezihambelanayo u-Aquarius kufuneka aziqwalasele: Aries , Gemini , Iponti Y Sagittarius
Leo Khetha Uphawu I-Capricorn Capricorn Emanzini